यौन चाहना : केटामा बढी कि केटीमा ? थाहा पाउनुहोस् अचम्मको तथ्य – Pahilo Page
यौन चाहना : केटामा बढी कि केटीमा ? थाहा पाउनुहोस् अचम्मको तथ्य
१३ कार्तिक २०७५, मंगलवार २२:११ 3473 पटक हेरिएको
एजेन्सी । किशोरावस्थामा पुगेपछि मानिसमा यौन इच्छा जागरुक हुन्छ । उचित समय, परिस्थिति र व्यक्तिको उपस्थितिमा यो इच्छा यौन सम्पर्कमा परिणत हुन सक्छ । तर यौन सम्पर्कको चाहनाका बारेमा समाजमा विभिन्न किसिमका धारणाहरु विद्यमान छन् ।
हाम्रो समाजमा यस अवस्थाका केटीहरु आफनो चाहना पूर्णरुपमा बाहिर ल्याउन सक्तैनन् । उनीहरु आफनो चाहनालाई दबाएर राख्छन् र प्रत्यक्षरुपमा आफ्नो इच्छालाई अगाडि आउन दिँदैनन् । १५ देखि १७ वर्षका किशोरावस्थाका केटीहरु श्रृङ्गार सामाग्रीको प्रयोग गर्ने, समूहमा आफूलाई सबैभन्दा राम्रो देखाउने, सफासुग्घरमा बढी ध्यान दिने जस्ता क्रियाकलापहरु गर्ने गर्दछन् । समय परिस्थिति र आफु बस्ने समाजको मूल्यमान्यता, रहनसहन अनुसार व्यक्तिहरुमा यौन चाहना फरक फरक हुन्छ । त्यसैले केटा वा केटीमध्ये कसलाई बढी यौन चाहना हुन्छ भन्न गाह्रो छ ।